सस्तो उर्वर काउन्टरफ्लो कूलि Machine मेशीन आपूर्तिकर्ता र कारखाना | YiZheng
काउन्टर फ्लो कूलिंग मेशीन एक अद्वितीय शीतलन संयन्त्रको साथ शीतलन उपकरणको एक नयाँ पुस्ता हो। चिसो हावा र उच्च नमी सामग्री बिस्तारै आन्दोलन गर्दैछ बिस्तारै र समान रूपमा चिसो प्राप्त गर्न।
काउन्टर फ्लो कूलि Machine मेसिन के हो?
को नयाँ पुस्ता काउन्टर फ्लो कूलिंग मेशीन हाम्रो कम्पनी द्वारा अनुसन्धान र विकसित गरिएको, चिसो पछि सामाग्री तापमान कोठाको तापमान ℃ higher भन्दा उच्च छैन, वर्षा दर 3..8% भन्दा कम छैन, उच्च-गुणवत्ता pellet को उत्पादनको लागि, गोली को भण्डारण समय लम्बाइ र सुधार आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण भूमिका खेले। यो एक नमूना हो जुन विदेशमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ र परम्परागत कूलि equipment उपकरणको उन्नत प्रतिस्थापन हो।
काउन्टर फ्लो कूलि Machine मेशीनको कार्य सिद्धान्त
जब सुकाउने मेसिनको कणहरू माध्यमबाट जान्छन् काउन्टर फ्लो कूलिंग मेशीन, तिनीहरू वरपरको हावाको सम्पर्कमा आउँछन्। जबसम्म वातावरण संतृप्त हुन्छ, यसले कणहरूको सतहबाट पानी लिनेछ। कणहरूको भित्रको पानी मलको दानाको केशिकाहरूको माध्यमबाट सतहमा सारिन्छ र त्यसपछि वाष्पीकरणबाट टाढा राखिन्छ, त्यसैले मल दाताहरू चिस्याइन्छ। एकै समयमा, गर्मी हावाले अवशोषित गर्दछ, जसले पानी बोक्ने क्षमतामा सुधार गर्दछ। प्रशंसक द्वारा चिसो मा उर्वर कणहरु को गर्मी र चिसो दूर दूर हावा निरन्तर डिस्चार्ज छ।
काउन्टर फ्लो कूलिंग मेशीनको अनुप्रयोग
मुख्य रूपमा ग्रेनुलेसन पछि उच्च तापमान दाना पदार्थ कूलिंग को लागी प्रयोग गरीन्छ। मेशिनसँग एक विचित्र शीतलन संयन्त्र छ। चिसो हावा र उच्च तापक्रम र उच्च आर्द्रता सामग्री विपरीत दिशामा सर्दछन्, ताकि सामग्री बिस्तारै बिस्तारै चिसो हुन्छन्, अचानक चिसोका कारण सामान्य ठाडो कूलरले गर्दा हुने सामग्रीको सतह क्र्याकबाट अलग रहन्छ।
काउन्टर फ्लो कूलि Machine मेसिनको फाइदा
को काउन्टर फ्लो कूलिंग मेशीन राम्रो शीतलन प्रभाव छ, उच्च स्वचालनको डिग्री, कम आवाज, सरल अपरेशन, र कम रखरखाव। यो एक नमूना हो जुन विदेशमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ र एक उन्नत प्रतिस्थापन शीतलन उपकरण हो।
【१】 कूल्ड कणको तापक्रम कोठाको तापक्रम +3 ℃ ~ + ℃ भन्दा बढी हुँदैन; वर्षा = %.%%;
【२】 यो बन्द हुँदा स्वचालित गोली डिस्चार्जको अनुपम कार्य गर्दछ;
;】 समान कोलिing र क्रिशिंगको कम डिग्री;
Structure】 structure सरल संरचना, कम अपरेटिंग लागत र सानो अन्तरिक्ष व्यवसाय;
काउन्टर फ्लो कूलिंग मेशीन भिडियो प्रदर्शन
काउन्टर फ्लो कूलिंग मेशीन मोडेल चयन
क्षमता (t / h)
कूलि volume भोल्युम (मि)
०.7575 + ०. .7
अघिल्लो: पल्भराइज्ड कोल बर्नर
अर्को: रोटरी ड्रम सीइभिंग मेशीन
परिचय ट्विन स्क्रू एक्सट्रुजन फर्टिलाइजर फर्निलाइजर ग्रान्युलेटर मेशिन के हो? डबल स्क्रू एक्सट्रूजन ग्रान्युलेशन मेशिन एक नयाँ ग्रान्युलेसन टेक्नोलोजी हो जुन परम्परागत ग्रान्युलेसन भन्दा फरक छ, जुन फिड, मल र अन्य उद्योगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ग्र्यानुलेसन विशेष गरी सुक्खा पाउडर दानाको लागि महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। यो एन ...
नयाँ प्रकार अर्गानिक र कम्पाउन्ड मल उर्वरक ...
परिचय के नयाँ प्रकार अर्गानिक र कम्पाउन्ड उर्वरक ग्रान्युलेटर हो? नयाँ प्रकारको अर्गानिक र कम्पाउन्ड फर्टिलाइजर ग्रान्युलेटर एक दाना उपकरण हो जुन सामान्यतया मिश्रित मल, जैविक मल, जैविक मल, नियन्त्रित रिलीज मल, आदि उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो ठुलो र चिसोको लागि उपयुक्त छ।
परिचय भर्टिकल चेन फर्टिलाइजर क्रेशर मेशिन के हो? वर्टिकल चेन फर्टिलाइजर क्रेशर यौगिक मल उद्योगमा प्राय जसो प्रयोग हुने कुचल कुचल उपकरण हो। यो उच्च पानी सामग्री संग सामग्री को लागी एक मजबूत अनुकूलन योग्यता छ र अवरोध बिना सहज खाना खुवाउन सक्छ। सामग्री एफ बाट प्रवेश गर्दछ ...
परिचय केमिकल फर्टिलाइजर केज मिल मिल मेसिनको लागि के प्रयोग गरिन्छ? केमिकल मल फर्जिलाइज केज मिल मेशिन मध्यम आकारको क्षैतिज केज मिलसँग सम्बन्धित छ। यो मेशीन प्रभाव कुचलको सिद्धान्त अनुसार डिजाइन गरिएको छ। जब भित्र र बाहिरका पिंजराहरू उच्च दिशाको साथ विपरित दिशामा घुमाउँदछन्, सामग्री क्रस गरीन्छ ...